Bentakostiga, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Waxaa jira mowduucyo badan oo ku habboonaan kara wacdiga Bentakostiga: Ilaah wuxuu ku dhex nool yahay dadka, Ilaah wuxuu siiyaa midnimo xagga ruuxiga ah, Ilaah wuxuu siiyaa aqoonsi cusub, Ilaah wuxuu ku qoraa sharcigiisa qalbiyadeenna, Ilaah wuxuu dadka la heshiiyaa isaga laftiisa iyo kuwa kale oo badan. Mawduuc ka dhex dhacay fikradihiina ku saabsan isu diyaarinta Bentikostiga sannadkan wuxuu ku saleysan yahay Ciise wuxuu yiri, waxa Ruuxa Quduuska ahi sameyn doono ka dib markuu soo sara kaco oo uu jannada kor u aado.
Isagu wuxuu daaha ka qaadi doonaa ammaantayda; waayo, wixii uu kuu sheegi doono wuxuu i aqbalaa (Yooxanaa 16,14 NG). Wax badan ayaa ku jira hal jumladdan. Waxaan ognahay in Ruuxa inagu dhex jira uu ka shaqeynayo inuu naga dhaadhiciyo inuu Ciise yahay Sayidkeenna iyo Badbaadiyeheenna. Waxaan sidoo kale ka ognahay muujinta in Ciise yahay walaalkeen ka weyn, kaasoo si shuruud la’aan ah noo jecel oo noo heshiisiiyay aabaheena. Dariiqo kale oo Ruuxu ku buuxiyo wixii Ciise ku hadlayna waa iyada oo loo waxyoodo, sida aan ugu adeegsan karno wararka wanaagsan xiriirkeenna iyo kuwa kale.
Waxaan aragnaa tusaale wanaagsan oo tan ah markaan akhrino dhalashada kaniisadda Axdiga Cusub maalintii Bentakostiga, toban maalmood ka dib ubaxnimadii Ciise. Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay inay sugayaan maanta iyo waxa maalintaas dhici doona: "Oo markuu iyagii la joogay, wuxuu ku amray inayan ka tegin Yeruusaalem, laakiin inay sugaan ballankii Aabbaha, oo uu igu yidhi inaad iga maqasheen." (Falimaha Rasuullada 1,4) .
Sababta oo ah waxay raaceen tilmaamaha Ciise, xertii waxay ku arkeen imaatinka Ruuxa Quduuska ah xooggiisa oo dhan. Falimaha Rasuullada 2,1: 13 waxay sheegaysaa tan iyo hadiyadda ay heleen maalintaas, siduu Ciise ugu ballanqaaday. Markii hore waxaa yimid sanqadha dabayl weyn, ka dibna afafyo dabeed, ka dibna Ruuxu wuxuu muujiyey xooggiisa mucjisada ah isagoo xer u siinaya xertii hadiyad gaar ah oo ku saabsan wacdinta sheekada Ciise iyo injiilka. Intooda badan, oo dhan, xertii oo dhan baa si mucjiso ah uga hadlay. Dadkii maqlay waxay la yaabeen oo ka yaabeen qisadii Ciise maxaa yeelay waxay ku maqleen afkooda iyagoo ka soo jeeda dad loo arko inay yihiin kuwa aan wax baranin oo aan wax baran. (Galilean). Qaar ka mid ah dadka ayaa ku qoslay dhacdooyinkaas waxayna sheegen in xertii ay sakhraameen. Ku jees jeeska kuwa noocan oo kale ah ayaa jira maanta. Marka loo eego aragtida aadanaha, xertii maahan sakhraan (oo waxay noqon laheyd tarjumaad khaldan oo Qorniin ah si ay u sheegaan inay khamri sakhraansanaayeen).
Waxaan ka helnaa ereyada Butros ereyadii dadkii badnaa ee ku dhex jiray Falimaha Rasuullada 2,14: 41-325. Wuxuu caddeeyey runnimada dhacdadani mucjisada ah, oo caqabadaha luqadaha ka sarreeyay ay jabeen, taas oo ah calaamad muujinaysa in dadka oo dhami ay hadda ku midoobeen Masiixa. Taasoo calaamad u ah jacaylka Ilaah u qabo dadka oo dhan iyo rabitaankiisa inay iyagu iska leeyihiin, oo ay ku jiraan dadka ka yimid waddamo kale iyo quruumaha kale. Ruuxa Quduuska ah ayaa farriintaan ku suurta geliyey afafka hooyo ee dadkan. Xitaa maanta, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu suurto geliyaa in warka wanaagsan ee Ciise Masiix loo gudbiyo qaab ku habboon oo dadka oo dhan looga wada heli karo. Wuxuu awood u siiyaa rumaystayaasha caadiga ah inay ka marag furaan fariintiisa si la mid ah si ay u gaaraan quluubta dadka Ilaah ugu yeerayo Isaga. Sidan, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu dadka ugu gudbiyaa Ciise oo ah Sayidkii Caalamka, kaasoo wax walba iftiimiya iftiinka wax kasta iyo qof kasta oo ku sugan cosmos-kan. Qisada Cilmiga Nicea AD waxaan ka helnaa qoraal kooban oo kusaabsan Ruuxa Quduuska ah: "Waxaan aaminsanahay Ruuxa Quduuska ah". In kasta oo qirashadani ay si weyn uga hadlayso Ilaah aabihiis iyo Ilaah wiil ahaan, hadana ma aha inaan ku soo gabagabeyno in qorayaasha qirashadu ay aad u adkeysteen inay fiiro gaar ah u yeeshaan Ruuxa Quduuska ah. Sababta loo yaqaan magangelyada qaraabada ah ee Maskaxda waxaa ka jira Caqiidada 'Nicene Creed'. Fiqiga caanka ah Kim Fabricius wuxuu mid ka mid ah buugaagtiisa ku qoraa in Ruuxa Quduuska ahi uu yahay xubin aan is aqoon oo hoos udhaca ah oo ah Saddexanka. Isaga oo ah Ruuxa Quduuska ah ee Aabbaha iyo Wiilku, isagu ma raadinayo sharaftiisa, laakiin wuxuu ku dadaalaa in la ammaano Wiilka, oo isagana Aabbaha lagu ammaano. Ruuxu wuxuu sameeyaa tan, iyo waxyaabo kale, markii ay dhiirrigeliso, awood siiso oo nala socoto si aan u sii wadno oo aan u fulino himilada Ciise ee adduunkeenna maanta. Isaga oo adeegsanaya Ruuxa Quduuska ah, Ciise wuxuu qabtaa shaqooyinka macnaha leh isla mar ahaantaana wuxuu nagu casuumay inaan ka wada qeyb qaadano si la mid ah, tusaale ahaan sameynta asxaab, dhiirigeliso, caawiyo, iyo waqti la qaadashada, sidii uu ku sameeyay. (welina maantana waa ay jirtaa). Markay noqoto howsha, waa dhakhtar qalliinka wadnaha waxaanna nahay kalkaaliyeyaasheena. Haddii aan ka wada qaybgalno hawlgalkan wadajirka ah, isaga waxaan la kulmi doonnaa farxadda waxa uu sameynayo oo aan u fulinno himiladiisa dadka .. Waxba kuma jiraan kutubta Cibraaniga ama dhaqanka diinta Yuhuudda ee qarnigii ugu horreeyay oo xer ka dhigaya mid xer ah una diyaargarow imaatinka lama filaanka ah ee Ruuxa Quduuska ah maalintii Bentakostiga. Wax calaamad u ah cajiinka rootida (oo ay Yuhuuddu u isticmaaleen Iiddii Kibista-aan-khamiirka lahayn) waxay ku horseedi kareen xertii inay u oggolaadaan Ruuxa Quduuska ah inuu kula hadlo luqado kale, si ay ugu suurtogasho maalintaas inay la wadaagaan injiilka oo xaddidaan luqadda laga adkaado. Bentakostiga, Dhab ahaantii Ilaah wuxuu sameeyey wax cusub. Butros wuu gartay taas oo wuxuu u sheegay dadka in maalmihii ugu dambeeyey ay yimaadeen (Falimaha Rasuullada 2,16 f.) - runti aad uga muhiimsan oo macno badan mucjisooyinka ku hadalka afafka.
Fikirka Yuhuudda, fikradda maalmihii ugu dambeeyay waxay la xiriirtay waxsii sheegyada Axdiga Hore ee badan ee ku saabsan imaatinka Masiixa iyo Boqortooyada Ilaah. Sidaa darteed Butros wuxuu yiri waa xilli cusub oo soo ifbaxay. Waxaan ugu yeernaa waqtiga nimcada iyo runta, da'da kaniisadda ama waqtiga axdiga cusub ruux ahaan. Bilowgii Bentakostiga, ka dib sarakiciddiisa iyo koraantii ciise, ka dib, Ilaah wuxuu ku shaqeynayay qaab cusub adduunkan. Bentakostiga weli na xasuusiyaa runtiina maanta. Uma dabaaldegno Bentakostiga sidii iid qadiim ah oo axdi lala dhigtay Ilaah. Dabaaldegida wixii Eebbe noogu sameeyay maalintaas qayb kama ahan dhaqankii kaniisadda - kaliya maahan diinteena, laakiin kuwo kale oo badan ayaa sidoo kale ah.
Bentakostiga, waxaan u dabaaldegaynaa howlihii furashada ee Ilaah ee maalmihii ugu dambeeyay, markii Ruuxa Quduuska ah ee ka dhex shaqeeya uu si xoog ah u cusbooneysiiyay, beddelay, oo uu noo qalabeeyay si aan xertiisa u noqonno.- Kuwaas xertii ah oo watay warka wanaagsan xagga hadalka iyo ficillada, yar yar iyo mararka qaarkood siyaabo waaweyn, dhammaantoodna u leh sharafta Ilaaheenna iyo Bixiyahayaga - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Waxaan xasuustaa xigasho ka timid Johannes Chrysostomos. Chrysostomos waa eray Giriig ah oo macnihiisu yahay "afka dahabka". Naanaystaanani waxay ka timid qaabkiisii ​​wacnaa.
Wuxuu yiri: nolosheena dhan waa iid. Markuu Bawlos yidhi "Marka aynu dabbaaldegno iidda" (1 Korintos 5,7f.), Ma uusan u jeedin Iidda Kormaridda ama Bentakostiga. Wuxuu sheegay in markasta ay tahay xaflad loo sameeyo Masiixiyiinta ... Maxaa wanaag ah oo aan wali dhicin? Wiilka Ilaah wuxuu kuu noqday bini aadam. Isagaa idinka badbaadiya dhimashada wuxuuna kuugu yeedhay boqortooyo. Miyaadan helin waxyaabo wanaagsan oo aad haddana qaadatid? Ma jiraan wax kale oo aad sameyn kartid laakiin u dabaaldeg xaflad noloshaada oo dhan. Ha u oggolaan qofna inuu dareemo niyadjab saboolnimo, jirro, ama colaad darteed. Waa xaflad, wax walba - noloshaada oo dhan! ".